MinnyoMaharsan: စာအုပ် လမ်းညွှန်
Post အသစ်လည်းမတင် ဘာမှလည်း မလုပ်ဘူးဆိုပြီး ဘလော့ဖန်တီးရှင်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ဘလော့ဂ်ကနေ ထုတ်ပစ်မယ်တဲ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ရသမျှလေးညှစ်ထုတ်ပြီး ကျွန်တော်ရေးရတာပါ။ မကောင်းရင်လည်း ကျွန်တော့် အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့။ ဘယ်သူ့ကို တင်သင့်တယ်တော့ အကြံမပေးတော့ပါဘူး။ ဘလောဂ့်ဆိုတာ လုပ်တုန်းကတော့ ကလိစရာတစ်ခုလို သဘောထားပြီး လုပ်တာဗျ။ ပစ်ချင်ပစ် ဖျက်ချင်ဖျက် ကိုယ့်သဘောပေါ့ဗျာလို့ထင်ခဲ့တာ။ ထားပါတော့လေ။
ကျွန်တော်ဆိုတာလည်း စိတ်ဓါတ်သိပ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ သူများဘလော့ဂ်တွေ နေတိုင်းဖတ်ပြီး information လေးတွေစု ကောင်းနိုးရာရာ စာအုပ်လေးတွေ download လုပ်နေတာ။ ကိုယ့်ရှိတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ upload ပေးရမှာကျတော့ သိပ်ပျင်းတာဗျ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို upload လုပ်ကြည့်တိုင်း ကိုယ် download လုပ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအတွက် upload လုပ်ပေးသူကို သိပ်ကျေးဇူးတင်မိတာ။
ကဲ..ကိုယ်မတင်နိုင်တော့လည်း တွေ့တဲ့ နေရာလေးတွေကို ညွှန်ပြပြီး ဘာတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ information ပေးရင် မရလားဗျာ။ ဒါဆို စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူစာရင်းထဲပါနိုင်တာပေါ့။
၀က်ဆိုဒ် တစ်ခုမှာ မြန်မာပြည်မှစာအုပ်များဆိုပြီး အုပ် ၄၀ လောက် တွေ့သဗျ။ စာအုပ်အဟောင်းစုဖို့ ၀ါသနာပါရင် download သာ လုပ်ပေရော့ဗျို့ ။
1) A Classified List Of The Plants Of Burma
A M Sawyer & Daw Nyun
2) A Grammar Of Pali Language. Vol 3
3) A Manual Burmese Shorthand
E C S Shuttleworth
4) A Practical Grammar Of The Pali Language
5) A Short Account Of The Golden Jubilee Of Bishop Bigandet
E M DeSouza
6) A Translation Of A Digest Of The Burmese Buddhist Law Inheritance And Marriage. Vol 1
7) A Treatise On Elephants: Their Treatment In Health And Disease
8) A Vocabulary: English, Burmese, Hindustani & Tamil In Characters With The Burmese Also In Native Letters
William Henry Begbie & Abraham Joseph [compiled]
9) Archaeological Notes On Pagan
10) Burmese Assistant Based Upon The Principle Of A Sign For A Sound
R B Hancock
11) Burmese Grammar And Grammatical Analysis
A W Lonsdale
12) Education Department, Burma: Departmental Instructions. Vol 11
13) Flora Of The Agricultural College Station Mandalay
14) Inscriptions Of Pagan, Pinya And Ava
15) Lectures Delivered At Tavoy Under The Auspices Of The Miniing Advisory Board
16) List Of The Burmese Names Of Trees And Plants Given In Kursz's Forest Flora Of British Burma
17) List Of Trees, Shrubs And Principal Climbers, Etc. Recorded From Burma
J H Lace
18) Manipuri Self Taught
19) Nomenclature Of Diseases In Burma
20) Pali Grammar, A Phonetic And Morphological Sketch Of The Pali Language
21) Publications Of The Archaeological Department, Burma. Vol 1
22) Report Of The Rangoon Playground Committee
23) Report Of The Stock Breeding Committee Burma 1917
24) Report Of The Superintendant, Archaeological Survey, Burma For The Year Ending 31 March 1925
25) Report On Archaeological Work In Burma For The Year 1903-04
26) Report On The Mandalay Agriculture College Farm
S R Rippom
28) The Anglo Burmese Student's Assistant
29) The Birds Of Burma
H H Harington
30) The Burma Boiler Manual
31) The Kalyani Inscriptions Erected By King Dhammaceti At Pegu In 1476 A.D.
32) The Mahajanaka Jataka
Taw Sein Ko [Trans]
33) The Palm Beetles in Burma
C C Ghosh
34) The Principles Of Buddhist Law
35) The Shwe Dagon Pagoda, Rangoon
T Hesketh Biggs
36) The Student's Guide To Burmese Spelling
Maung Po Hla
37) The Youth's Guide To Arithmetic
38) Translation Exercises For Burmese Boys. Pt 1
39) Translation Of A Digest Of The Burmese Buddhist Law. Vol II: Marriage
40) Vocabulary And Phrase Book In English And Burmese
အဲ လိပ်စာကတော့ www.aseaninfonet.org ပါ။
Posted by မင်းညို at 9:38 PM
ရွှေတွင်းကြီးထဲ ပစ်ချပေးလို့ ကျေးဂျူးကဘာပါ